Best Forex Broka na Obere & Micro Akaụntụ April 2021 | Mụọ ahia 2
Best Forex Broka na Obere & Micro Akaụntụ 2021
Ihe dị ka onye ọ bụla nọ na mbara ụwa maara ihe ahịa azụmaahịa bụ. Ma, na ọtụtụ ụdị akaụntụ na-enye, ịmara ebe ịmalite ga-abụ ihe mgbagwoju anya.
Y’oburu na ibido n’uwa ahia ahia ahia, inwere ike iche obere ego ma obu micro Forex Forex. Dị ka aha ahụ na-egosi, nke a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na obere obere.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị gaghịzi achọ nnukwu ego iji bido azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa, N'ezie, ndị ahịa nwere ike na-azụkarị obere $ 50.
Ihe ndekọ ego micro Forex na-arụ ọrụ na obere nkeji nke 1,000, n'ihi ya, ha na-abụkarị ndị kachasị mfe ịmalite - karịsịa maka ndị ahịa ọhụrụ. Ihe ndekọ ego Forex na-azụkwa na obere obere, na-abụkarị mpaghara 10,000.
Ọ bụrụ na micro ma ọ bụ obere Forex trading dị ka ihe ị nwere mmasị, mgbe ahụ ị bịara ebe kwesịrị ekwesị. Anyị ga-agafe ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akaụntụ mini na micro Forex, otu ha si arụ ọrụ, yana otu esi achọta ezigbo onye na-ere ahịa na-enye ha.
Kedu ihe bụ Forex Mini / Micro Account?
N'ụzọ bụ isi, obere akaụntụ Forex bụ akaụntụ forex nke na-eme ka ndị na-etinye ego ọhụrụ na-azụ ahịa n'ahịa na obere azụmaahịa na ọnọdụ nza dị ukwuu. Zụ ahịa site na obere na obere akaụntụ na-ewetu ihe egwu ma belata mfu ndị nwere ike. Dịka o doro anya na ị kwutere, akaụntụ micro dị obere karịa obere. More na nke ahụ na nkeji.
N'ikwu okwu n'ozuzu, egosiputara akụkọ mbu na nkwekọrịta nkwekọrịta atọ dị iche iche: micro, mini and standard:
Ihe ndekọ ego micro na-enye ndị na-etinye ego ohere ịbanye na nkwekọrịta nha nke 1,000 base asset units.
N'ihe banyere obere akaụntụ, mmadụ nwere ike iji 10,000 base units.
Ọ bụ ezie na nkwekọrịta nkwekọrịta na-arụ ọrụ na 100,000 isi ego ego.
N'otu ụzọ ahụ, ihe nwere ike ịnweta (pasent na isi) ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ ọnụego ije dị ala, na 10 cents maka micro na $ 1 maka obere kwa akọrọ; kama ọkọlọtọ $ 10.
Fọdụ saịtị na-enye ugbu a obere akaụntụ 'nano', na-enye ndị mmadụ ohere ịzụ ahịa ọtụtụ nke naanị otu ntọala 100 ($ 0.01).
Kedu ka Akaụntụ Forex Mini na Micro si arụ ọrụ?
Ekwesịrị ikwu na nhọrọ ntanetịime obere na obere na-adọta ndị na-etinye ego ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-enweghị uche, n'ihi ntakịrị nkwekọrịta ahụ. Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa na obere ohere enweghị nnukwu mfu. Nke a nwere ike inye aka maka ndị ahịa na-amụkwa etu esi azụ ahịa Forex.
Dịka ndị na-ejide akaụntụ na obere na obere ohere nwere ike ịbanye otu ngwaọrụ azụmaahịa na ahịa dị ka ndị ji ihe ndekọ akaụntụ (chaatị, nyocha, nkwado ndị ahịa, nyiwe, wdg).
Dika anyi kwuworo, a na-ahazi ihe ndekọ ego gbasara ọkọlọtọ n'ọtụtụ azụmaahịa nke mpaghara 100,000. N'otu oge, ndị na-ere ahịa akaụntụ micro ga-abanye iwu na ọtụtụ 1,000 nkeji, obere akaụntụ ga-abanye iwu nke nkeji 10,000.
Obere nha na-enyere ndị ahịa oge kara aka ịtụnye ọtụtụ iwu dị iche iche, site na ịgbasa ọnụọgụ nke ego incognito karịa nhọrọ nke ego abụọ. Ọzọkwa, ndị ọchụnta ego ọhụụ nwere ike ijikwa ihe ọghọm ha karịa, n'ihi ntakịrị nzọ.
Akaụntụ Forex Mini na Pips
The mba ọzọ mgbanwe ahịa trades ego na a hotara mgbasa uru, dịka ọmụmaatụ, EUR / USD 1.200. Ntinye ego ọ bụla na-ebu amụma na ego ga-agbanwe (na mmekọrịta mmekọrịta ego). A na-amata mgbanwe ahụ dị ka ngagharị pipụ.
N'ihe atụ dị n'elu, onye na-achụ ego na-ebu amụma na ego isi (euro) ga-arịgo na ọnụ ahịa megide ego ọnụego (US dollar na nke a). Ofgwọ nke nkwupụta ahụ gosipụtara ebe ntụpọ 4 (.2000). Agbanyeghị, mgbe a bịara na Japan yen, e gosipụtara ọnụego ya na ebe ntụpọ 2, dịka ọmụmaatụ, 123.62.
Elu ụwa, ahịa azụmaahịa na-atụle mgbanwe ọnụahịa site na iji pips, nke anọ akara ntụpọ. Pip na-anọchite anya ọbụlagodi obere mgbanwe nwere ike ịdị na ego nke ego. A na-atụle mgbanwe ego na obere mkpụrụ ego, nke pụtara na ego a ga-enweta ma ọ bụ furu efu na ahia nke otu ụzọ ego ga-adịkarị obere. Yabụ 100, 1,000, 10,000 na 100,000 ọnụ ọgụgụ nke ntinye (opekata mpe ego).
N'ihi ya, ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-eche maka nke a site na ịgbakọ nkeji ego na nha nha, nke na-enyekwa ndị na-etinye ego ego. Ọnụego nke pip ga-agbanwe dabere na ego abụọ ị na-azụ ahịa yana ọnụahịa ego isi.
Ọ bụrụ na akaụntụ azụmaahịa na-eji USD - otu pip bụ $ 0.10 maka akaụntụ micro, $ 1 maka obere akaụntụ yana $ 10 maka akaụntụ ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na ọmụmaatụ, ego ọnụego bụ Yen ndị Japan, pipụ ga-adị iche dabere na ọnụego ahụ.
Forex Mini na Micro Akaụntụ Akaụntụ
Standarddị nha nke onye na-ere ahia bụ 100,000 nkeji. Nke a pụtara na iji zụọ ihe n'emeghị ihe ọ bụla, onye na-etinye ego chọrọ nnukwu ego.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na azụmaahịa mbụ anyị banyere EUR / USD na 1.2000, euro na-aga 1.2075 site na mgbe ahịa ahụ mechiri. The pip na nke a bụ 75 nkeji (1.2000 - 1.2075 = .0075).
Micro Forex akaụntụ: 1,000 x .0075 = $ 7.50 uru
Obere akaụntụ Forex: 10,000 x .0075 = uru $ 75
Akaụntụ Forex Standard: 100,000 x .0085 = $ 750 ritere
Na-esote, ka anyị chee na ahịa euro na-agbadata 1.1990, nke a gosipụtara ọnwụ nke 10 pips.
Micro forex akaụntụ 1,000 x .0010 = $ 1 ọnwụ
Obere ego mbu Forex 10,000 x .0010 = $ 10 efu
Standard Forex akaụntụ 100,000 x .0010 = $ 100 na-efu
N'adịghị ka ndị na-ere ahịa na-enye ndị na-ere ahịa ego na akaụntụ niile, ha na-enyere ndị na-etinye ego aka isonye na azụmaahịa dị oke egwu na obere ego.
N'ihe banyere leverage, onye na-ere ahịa azụmaahịa ga-akwụnye onye na-etinye ego ego zuru oke iji were nnukwu ọnọdụ. N'okwu a, onye ahịa ahụ agaghị enwe ike iji ọnọdụ ahụ na ego ha na akaụntụ ha.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa azụmaahịa na-enye ntinye ego nke 100: 1 ga-ekwe ka onye na-etinye ego na obere akaụntụ nyere iwu otu nha 100,000 na-eji ego ego nke 1,000 ego nkeji. Cheta, itinye ego anaghị eme ka uru bawanye, kamakwa ọghọm.
Laghachi na ihe atụ anyị jiri n'elu (75 pip gain), ntinye ego nke $ 1,000 ga - eme $ 750 na 100: 1 leverage. Yabụ, ịgbanye 10 pip na-emegide onye ahịa ahụ efu $ 1,000. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a na-etinye ego izizi gị n’ọnọdụ dị elu.
Etu esi ahota Akaụntụ Mini ma ọ bụ Micro Forex
Site na ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịzụ ahịa na azụmaahịa azụmaahịa, ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa na ntanetị adịla asọmpi. Dika odi otua, otutu ugbua otutu ulo oru na-acho inye ndi ahia ahia ha.
Nnukwu ụdị dị otú ahụ bụ ozi ọma maka gị dị ka onye na-etinye ego, ebe ọ na-enye gị ohere ịhọrọ obere ma ọ bụ micro Forex broker kwesịrị ekwesị maka ụdị azụmaahịa gị. Nsogbu a bụ inwe oke nhọrọ na mkpịsị aka gị nwere ike ime ka o sie ike karị ịhọrọ ezigbo onye na-ere ahịa.
N'iburu nke a n'uche, anyị achịkọtara ndepụta nke ihe ndị kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa obere ma ọ bụ micro forex iji gboo mkpa gị.
Iwu dị maka nchedo gị ma bụrụ ezigbo ihe na nyocha ịchọrọ maka onye na-ere ahịa azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa na UK niile nwere ikike ịnweta ikikere azụmaahịa site na FCA.
FCA dị oke mkpa ma a bịa n'ịchịkwa na ịchekwa ego ị tara ahụhụ si n'aka ndị ahịa aghụghọ. Ha na-ejide n'aka na ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-akwụwa aka ọtọ, uzo, na ijikwa azụmaahịa n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe onye na-ere ahịa na-achịkwa onye isi njikwa dị ka FCA, ASIC (Australia), ma ọ bụ CySEC (Cyprus) - ị dịka onye na-etinye ego nwere ike ijide n'aka na ị na-asọpụrụ nzuzo gị na ego gị. Nke a pụtakwara na ị nwere ike ịbụ akụkụ nke atụmatụ ịkwụ ụgwọ azụmaahịa. N'ihi ya, a ga-ekewapụ ego gị ma chebe ya.
Ntụle ọzọ bụ usoro nkwụnye ego na iwepụ. N'ezie, mgbe ị na-edebanye aha na onye ọ bụla na-ere ahịa na ọdụ ụgbọ mmiri mbụ ị na-akpọ bụ ịkwụ ụgwọ akaụntụ ahịa ọhụrụ gị.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa obere na micro Forex ga-ekwe ka ndị ahịa tinye ego site na nnyefe ego ọdịnala, n'agbanyeghị, nke a agaghị adabara mmadụ niile. N'ezie, usoro nkwụnye ego a nwere ike were ụbọchị ole na ole rụọ ọrụ.
N’aka ozo, oburu n’inwe obi uto ibido ahia ozigbo ihe kacha mma i g’eme bu ichota onye nwere obere / micro broka nke nwere ego dika debit / kaadị akwụmụgwọ na e-wallets dika Skrill, Neteller na PayPal.
Gbasa bụ ihe ọzọ dị mkpa ị ga-echebara echiche. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ọdịiche dị n'etiti nzụta ma na-ere ọnụahịa ego ọ bụla eburu. Ọnụ ọgụgụ nke pipụ n'etiti ọnụ ahịa ndị ahụ na-ekpebi mgbasa. N'ihi ya, mgbasa nwere ike ime nnukwu ihe dị iche na ike gị ịme uru ụfọdụ.
Ọ bụrụ na mgbasa nke GBP / USD bụ pips 3, nke a ga - apụta na itinye ego gị ga - achọ ma ọ dịkarịa ala pipụ 3 iji mee ka ị gbakee. Dị ka ọ dị, mgbasa ahụ bụ otu n'ime ihe dị oke mkpa iji chọpụta maka mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa micro / mini ọhụrụ.
Nke a bụ ihe atụ nke mgbasa naanị iji dokwuo anya.
Ka anyị were ya na ị na-ere EUR / USD na micro / mini broker gị.
Ọnụahịa ịzụta bụ 1.2100
Ọnụahịa ere bụ 1.2106
Dị ka anyị kwuru, a na-egosipụta mgbasa ahụ na pipụ, yabụ ịkwesịrị ịdeba akara ikpeazụ nke ọnụahịa ọ bụla.
N'ihe atụ anyị, ihe dị iche bụ 6. Nke a pụtara na mgbasa na EUR / USD nhata 6 pips.
Isslọ ọrụ ahia ahia
Ebe ọ bụ na anyị na-atụle okwu banyere ụgwọ, anyị kwesịrị ikwu maka azụmahịa isslọrụ. Enweghị ndị na-ere ahịa abụọ bụ otu, yabụ ikpo okwu ọ bụla ga-enwe ụgwọ dị iche iche (ma ọ bụrụ na ọ bụla).
Ebe ụfọdụ ndị na-ere ahịa ga-ahapụ ndị ahịa ka ha zụta ma ree ọnụọgụ abụọ na-enweghị ọrụ ọ bụla, ụfọdụ ga-ekwupụta pasent maka azụmaahịa ọ bụla emere. Mgbe ị na-eji ezigbo onye na-azụ ahịa azụmaahịa, ọ ga-abụ na ị ga-akwụ ụgwọ ọnụego ọ bụla na azụmaahịa ọ bụla ị na-eme.
Ọ bụrụ na ndị na-akwụ ụgwọ ebubo ebubo 0.4% na ọrụ azụmaahịa na-azụ, na ị zụrụ buy 2,000 uru nke EUR / USD, ị ga-akwụ € 8 na ọrụ.
Ka anyị kwuo na ị mechiri na EUR / USD gbanwere na uru nke 2,400 9.60 - nke a ga-abụ ọrụ € XNUMX.
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa mini / micro Forex na anyị na-akwado ịkwụ ụgwọ ọrụ azụmaahịa ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye ahịa na-ahọrọ ilekwasị anya naanị n'otu ụzọ abụọ ọhụụ dị ka EUR / USD na GBP / USD, mgbe ahụ nke a nwere ike ọ gaghị adị gị mkpa.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ pọtụfoliyo dị iche iche dị iche iche ma chọọ ịzụ ọtụtụ akụnụba dị iche iche n'otu oge - mgbe ahụ ụdị dị iche iche dị mkpa. Fọdụ ndị na-ere ahịa nwere nhọrọ sara mbara karịa ndị ọzọ.
Yabụ mgbe ị na-achọ onye azụmaahịa micro / mini forex kwesịrị ekwesị, ị ga-ahụ nke nwere nhọrọ mara mma gụnyere exotics, umuaka na ndị isi. Ozi a niile ga-adị na ntanetị azụmaahịa ma ọ nwere ike inye aka dị ukwuu ịmara tupu ịmee kpamkpam.
Ngwa ahia ahia di
Onye ọ bụla na-azụ ahịa azụmaahịa maara mkpa ọ dị ịdị na-agbaso akụkọ akụ na ụba na akụnụba ọhụụ. Na oge a na-agbanwe agbanwe, ọ dị mkpa ịmara ihe ọ bụla nwere ike imetụta ahịa azụmaahịa.
Ihe omuma atu nke a bu aha ojoo Brexit nke mere ka otutu ndi mmadu choo ka hapu European Union. Nke a nwere mmetụta na-adịghị mma na uru GBP bara.
E wezụga nyocha akụkọ akụkọ bụ isi, ịmụ banyere usoro ọnụ ahịa akụkọ ihe mere eme na data nwere ike ịdị oke mkpa iji nwee ọganiihu. Kwesịrị ịhọrọ onye na-ere ahịa Forex na ọtụtụ ihe ngosipụta dị iche iche na ntanetị.
Offọdụ n'ime ihe bara uru na nke a bụ:
A na-elegharakarị mkpa ọ dị inwe otu ndị na-akwado ndị ahịa anya. A sị ka e kwuwe, enwere ike ịnwe oge ịchọrọ nkwado nke ukwuu na akaụntụ micro ma ọ bụ obere Forex.
N'iburu nke ahụ n'uche, ị ga-ahọrọ onye na-ere ahịa nke na-enye ndị ahịa ọtụtụ ọwa kọntaktị. Contactdị kọntaktị ndị a na-ejikarị bụ ekwentị, email, ụdị ịkpọtụrụ na nkata ndụ.
Ọ bụrụ na nhọrọ ịhọrọ azụmaahịa gị nwere 24/7 ọrụ ndị ahịa - na-egosi ụdị nke Forex ahịa, mgbe ahụ nke ahụ bụ ezigbo akara.
Chọta ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ọnụnọ dị ukwuu na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ cherry na achicha ahụ. Nke a bụ ụzọ dị mma iji gụọ banyere ahụmịhe ndị ahịa ndị ọzọ yana ị nweta ozi akụkọ akụ na ụba na akụnụba kachasị ọhụrụ.
Y’oburu na ichota onye ahia ahia nke na enye mmadu obere na micro microsoft, ị ga-edebanye aha tupu ịmalite ahia.
Ọ bụrụ na ị nwetabeghị ọkwa ntinye, biko gaa n'ihu 'Ndị ahịa Forex kacha mma na Obere Akaụntụ Mini & Micro' 2021. Lee, anyị enyela gị aka site na ịdepụta ụfọdụ ndị a ma ama ndị tụkwasịrị obi na ndị na-ere ahịa na-enye ụdị akaụntụ gị ịchọrọ.
Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ịchọta nke gị, biko chọta n'okpuru ntuziaka 4 anyị banyere otu esi edebanye aha na onye na-ere ahịa azụmaahịa.
Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị kpebiri na onye na - ere ahịa kwesịrị ekwesị bụ ịga n’elu ikpo okwu wee debanye aha. Iji malite, ị ga-achọ ịnye ụfọdụ ozi dị mkpa. Nke a bụ ụkpụrụ omume mgbe ị na-edebanye aha maka akaụntụ azụmaahịa kachasị.
Na mbu, ikwesiri itinye aha zuru ezu, adreesị ebe obibi, ụbọchị ọmụmụ, nkọwa kọntaktị na ọnọdụ ụtụ. Mgbe nke a gasị, a ga-achọ ka ị nyefee ụfọdụ nkọwa ego. Ọzọkwa, ịnwe ihe ọmụma a bụ ụkpụrụ omume.
N'ikwu okwu n'ozuzu, nke a ga-agụnye ego ole ị na-akpata, ọnọdụ ọrụ gị, na atụmatụ efu bara uru. Ihe omuma a nile bu inyere onye na ere ahia aka imezi ihe kwesiri ekwesi.
Kwụpụ 2: Ahụmịhe azụmaahịa mbu
Nakwa ego gị, ndị na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịma ụdị ahụmịhe ị nwere (ma ọ bụrụ na ọ bụla). Tradingzụ ahịa Forex gụnyere iji ngwá ọrụ ego ka ndị na-ere ahịa mkpa iji nyochaa ozi a.
Ogologo ajụjụ ị ga-aza ga-adabere na onye na-ere ahịa na ụdị ego ị na-eme atụmatụ ịme
Kwụpụ 3: Mara Onye Ahịa Gị
A makwaara dị ka KYC, nke a bụ akụkụ ebe ndị ahịa kwesịrị ịchọpụta njirimara ha na onye na-ere ahịa. Usoro a ga - adi na otutu ndi ahia. Ọ na-agụnye itinyekarị otu paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. N'ọnọdụ ndị ọzọ, achọrọ ụgwọ ọrụ ma ọ bụ nkwupụta ụlọ akụ.
Kwụpụ 4: Nkwụnye ego Na Akaụntụ Forex Gị
Ozugbo onye na-ere ahia gosipụtara njirimara na akaụntụ gị, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa gị.
Dị ka anyị metụrụ na mbụ, ndị na-ere ahịa dị iche iche na-enye nhọrọ nkwụnye ego dị iche iche. Somefọdụ ụzọ ịkwụ ụgwọ nwere ike iwe ogologo oge karịa ndị ọzọ, yabụ buru nke ahụ n'uche mgbe ị na-ahọ otu ịchọrọ ịkwụnye.
Otu anyị si ekwu ọnụahịa Forex Broka anyị
Na-eche ka anyị ga-esi chịkọta ndepụta anyị nke kacha mma mini na micro akaụntụ Forex brokas?
N'okpuru, ị ga-ahụ usoro njirisi siri ike anyị.
Ikike ma nyere iwu - Anyị agaghị akwado onye na-ere ahịa nke anaghị achịkwa ya. Nke a kwesịrị ịgụnye onye na-enye ikike ikike dịka nke a FCA, ASIC, ma ọ bụ CySEC.
Commlọrụ dị ala - Ego ma ọ bụ obere ọrụ Forex Broka bụ ihe anyị na-achọ.
Nhọrọ nke ndị na-egosi teknụzụ - Ka ị na-enwekwu ngwa ahịa azụmaahịa dị n'aka gị, ka ị ga-amụtakwu.
Otutu nkwụnye ego na Nwepu nhọrọ - Ihe ka mkpa.
Na-agbasa - Anyị chọrọ ka ị nweta ego dị ka o kwere mee.
Di iche iche di iche iche nke Forex - Inwe ọtụtụ nhọrọ nke ego abụọ ịhọrọ site na-enye ndị ahịa ohere ịgbasa pọtụfoliyo ha
Ebe nrụọrụ weebụ Ahịa Enyi na Enyi - Ihe doro anya, nke dị nkenke nke dị mfe ịnyagharịa na-eme ka ndụ dịrị ndị ahịa mfe
Nnukwu Nkwado Ndị Ahịa - Ezi ndị ọrụ nkwado ndị ahịa bara ezigbo uru. Maghị mgbe ị ga - ahụ onwe gị na ndozi.
Ya mere, ugbu a ị maara ihe niile enwere ịma maka obere na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa, ịchọrọ ịchọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị iji mee ya.
E nwere ọtụtụ narị ịhọrọ site na ohere maka ndị na-ere ahịa na ntanetị n'ịntanetị, ya mere, anyị ejirila ụfọdụ n'ime ndị na-ere ahịa azụmaahịa kacha mma nke 2021 iji chekwaa gị ọrụ ụkwụ.
Iji gbochie ọgba aghara ọ bụla, biko mara na ụfọdụ n'ime ndị na-ere ahịa azụmaahịa na ndepụta anyị anaghị enye micro ma ọ bụ obere Forex forex akaụntụ kwa-ekwu. Ma, ha na-enyere gị aka ịzụ ahịa na oke osisi dị ala. Ka o siri dị, ha bụ akaụntụ micro / mini na aha niile.
Y’oburu n’icho ka egwuruegwu gi na iru ahia gi, ya mere eToro bu ezigbo ihe ndi ahia ohuru. E nwere ọtụtụ puku akụrụngwa ego ịzụta na ire. Nkwụnye ego pere mpe bụ naanị $ 200. eToro na-achịkwa ọ bụghị naanị FCA kamakwa ASIC na CySEC. Nwere ike itinye site na nnyefe akụ, debit / kaadị akwụmụgwọ, na PayPal. Naanị ezigbo ndị crypto dị maka ndị ọrụ US.
Capital.com anaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla ma nwee mgbasa ozi siri ike. Na ore ahia enye leverage na akara na ESMA ụkpụrụ nduzi. FCA na-achịkwakwa onye na-ere ahịa ahụ n'ụzọ zuru ezu ma na-enye ọtụtụ akụnụba ego.
N'oge a na-ede ihe, ntinye ego dị na 1: 20 na exotics na ụmụntakịrị na 1:30 na isi niile. Ọ bụrụ n ’ibi na mpụga Europe ma ọ bụ bụrụ dịka onye ahịa na-azụ ahịa, enwere ike ịnye gị oke dị elu. Itinye ego n’ime Capital.com dị mfe. Nke kachasị, ị nwere ike ịmalite site na nkwụnye ego dị ka 20 $ / £ .Nzọ ikpo okwu na-anabata usoro ịkwụ ụgwọ niile dị ka e-wallets, kaadị akwụmụgwọ / debit, na nnyefe ụlọ akụ.
N'oge a, ikpo okwu AVATrade na-enye ndị ahịa nnukwu ego 20% na akaụntụ Forex ruo $ 10,000. Iji nweta ego kachasị elu, ị ga-akwụ ụgwọ akaụntụ gị na $ 50,000. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụ ahịa na micro micro, nkwụnye ego pere mpe na AVATrade bụ naanị $ 100. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-enyocharịrị akaụntụ AVATrade gị tupu ego ahụ abanye na akaụntụ gị.
I kwutere ya, EuropeFX bụ ọkachamara na azụmaahịa Forex. Na mgbakwunye na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-akwado CFD dịka mkpuchi, ngwaahịa, mbak, na indices. Ihe ikpo okwu a na - enye gị ohere iji MetaTrader4 zụọ ahịa. Nke a na - enyere gị aka ịhọrọ ma ọ bụ mkpanaka / mbadamba ma ọ bụ desktọọpụ. Onye ahia ahia a nwere ihe omuma nke ulo a na-akpọ Eurotrader 2.0, yabụ oburu na ichoro ahia site na iji ihe ntanetiri webusaiti, ị kariri A ore awade ahịa n'ezie uko na-agbasa na isi ụzọ abụọ. EuropeFX na-achịkwa ma nye ikikere site na CySEC, yabụ ị ga-ejide n'aka na ego gị na ozi gbasara gị ga-echebe.
'Nza' na ahia ahia dị mkpa n'ịmepụta asụsụ azụmahịa nke ụwa n'etiti ndị ahịa na ndị na-ere ahịa. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mgbe ị na-ere ahịa na azụmaahịa azụmaahịa, iji obere akaụntụ Forex ma ọ bụ micro forex ga-ebelata ihe egwu gị.
Maka ndị ahịa azụmaahịa a kara aka, obere ma ọ bụ obere ọtụtụ nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji gbanwee pọtụfoliyo Forex, omume 'obere ihe egwu' na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na-amasị gị.
N'agbanyeghị otu ị gafere n'ahịa kachasị mmiri mmiri n'ụwa, akụkọ ndị a nwere ike inyere gị aka inweta ahụmịhe azụmaahịa na obere ego achọrọ. Dịka ọ bụla itinye ego, a ga - enwe ihe egwu ọ bụla na - enweghị obere nkwa - yabụ emehiela ihe na - atụ anya nnukwu uru.
Tupu ị banye na ikpo okwu nke onye na-ere ahịa, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịnwale ụfọdụ akaụntụ azụmaahịa ngosi. Nke a bụ ụzọ bara uru maka ndị ahịa iji nwee mmetụta maka azụmaahịa ahụ wee hụ ma ọ ga-arụ ọrụ na ụdị azụmaahịa gị.
Enwere ọdịiche dị na akaụntụ micro Forex na obere Forex Forex?
Eeh. Ebe ha abụọ na-ekwe ka obere azụmaahịa enwere ọdịiche dị n'etiti akụkọ abụọ ahụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, otu nza Micro bụ nkeji 1,000 - nke pụtara na 1 obere nza bụ $ 0.10 kwa pip. Obere nza bụ mpaghara 10,000, yabụ obere nza bụ $ 1 kwa pip.
Ihe ndekọ ego micro na mini Forex dị mma maka ndị mbido?
Eeh. Obere ihe ize ndụ na obere azụmaahịa na-eme obere na obere akụkọ Forex dị mma maka ndị ahịa azụmaahịa na-enweghị uche.
Achọtara m nyiwe nke onye na-ere ahịa na-amasị m mana ọ nweghị aha akaụntụ micro, enwere m ike iji onye na-ere ahịa a?
Eleghị anya. Imirikiti ndị na-ere ahịa azụmaahịa ga-enyere ndị na-etinye ego aka ịzụ ahịa na akaụntụ micro na obere Forex, mana ụfọdụ anaghị akpọsa ya nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ga-ebelata oke akaụntụ gị ọkọlọtọ na pipụ 0,1. E nwekwara ụzọ ndị ọzọ gbara ya gburugburu, dị ka ịnye ego nkwụnye ego pere mpe.
Iwu chọrọ azụmaahịa ọ bụla na UK iji nweta ikikere azụmaahịa site na ngalaba na-achịkwa FCA. A ga-egosipụta nke a nganga na nyiwe ziri ezi maka ndị ahịa ịhụ. Ọ bụrụ n ’esiteghị na UK, ndị na - achịkwa ọkwa kacha elu gụnyere ASIC (Australia) na CySEC (Cyprus).